आखिर आस्था भनेको के हो ? (लक्ष्मणरेखा) | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ चैत्र ३१, मंगलवार १०:२६ गते
हाम्रो प्राप्तिको बलियो स्रोत
गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, ‘सद्गुणी जीवनका निमित्त आस्था आवश्यक हुन्छ । मानिसको आस्था अपरिष्कृत हुँदैन । यसबाट समृद्धि प्राप्त हुन्छ ।’ गौतम बुद्धले भनेअनुसार मानिस विनाआस्था समृद्ध र सत्पात्र दुवै बन्न सक्दैन । विश्वास छैन भने मानिसका कुनै पनि काम कुरा हुन सक्दैनन् । जीवन भन्नु नै आस्थाको नाम हो, विश्वासको नाम हो ।
हामी परिवारमा बसेका छौँ । परिवारका प्रत्येक सदस्यका विचार र तिनका कार्यव्यवहारप्रति हामीलाई विश्वास छ । उनीहरुले गर्ने हरेक क्रियाकलापप्रति हामी निश्चिन्त हुन सक्दछौँ किनकि हामीमा उनीहरुप्रति गहिरो आस्थाभाव छ । हामी ढुक्क भएर व्यवहार गर्नका लागि पनि परिवारका सदस्यप्रतिको निष्ठा र निशङ्क विश्वासले ठूलो काम गरेको हुन्छ ।
समाजका अन्य मानिसहरुप्रति पनि हामीमा आस्था र विश्वास छ । देशका नेताहरुप्रति पनि यिनीहरुले नै हो आखिर देश बनाउने भन्ने भावना हामीले धारण गरेका छौँ । हामी भविष्यप्रति पनि त्यत्तिकै आशावादी छौँ । भोलिको आशामा आज हामीले कति श्रम र मिहिनेत गरेका छौँ भन्ने कुरा हामी प्रत्येकले महसुस गरेका छौँ । भविष्यमा गएर हामी ठूलो मान्छे बन्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ हामी अघि बढेका हुन्छौँ । यसको अर्थ हामी परिवार, समाज, देशसँगै हाम्रो भविष्यप्रति पनि आस्थावान् छौँ ।
भविष्यप्रतिको सुनौलो विश्वासले आज हामीलाई थप प्रेरणा मिलेको छ । हामी जाँगर र जोसका साथ काम गरिरहेका छौँ । आजको जाँगर, जोस, उत्साह, लगनशीलता र श्रम भविष्यप्रतिको हाम्रो सुन्दर विश्वासले गर्दा जन्मिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा हरेक चीज पाउनुका पछाडि त्यस चीजप्रतिको हाम्रो आस्थाको ठूलो भूमिका हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ, अर्थात् प्राप्तिको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै हामीभित्रको आस्था र विश्वास हो ।
आस्थाहीन भएर गरिएका कुनै पनि कामहरु सफल र सुखद हुन कहिल्यै सक्दैनन् । चाहे हामीले जे गरौँ, जसो गरौँ, हाम्रो सफलता र सिद्धिका पछाडि हामीभित्रको आस्थाले मह¤वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । यदि हामीले गर्ने भनेका कामहरुप्रति विश्वास भएन भने हामी मानसिकरुपमै असन्तुलित हुने सम्भावना बढेर जान्छ । आस्थाहीन तरिकाले गरिएका कामहरु मानसिक र शारीरिक शक्ति वृद्धि गर्नेभन्दा पनि क्षय गर्ने किसिमका हुन्छन् भन्ने विद्वान्हरुको मत छ ।
आस्था नभईकन मिहिनेत गर्न पनि मन लाग्दैन । यदि कुनै कामप्रति विश्वास नै छैन भने कसरी हामीले त्यो काम गर्न सक्दछौँ र ? यसप्रकार अविश्वास र अनास्था पालेर बस्ने मानिसहरु अन्ततः बेरोजगार र बेकामे बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जब समाजका व्यक्ति बेकामे हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ तब समाजमा अनावश्यक दुर्वृत्तिहरुले प्रमुखता पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । समाज अराजकतातिर जाने सम्भावनाका पछाडि पनि कामप्रतिको हाम्रो अनास्था र अविश्वास नै रहेछ ।
जो आस्तिक छ, जसले देश, धर्म, समाज, सामाजिक मूल्य र आदर्शहरुप्रति आस्था व्यक्त गर्दछ, त्यस्तो आस्थावान् व्यक्ति कहिल्यै पनि कर्महीन हुन सक्दैन । उनीहरु त झन् अत्यन्त क्रियाशील र गतिशील हुन्छन् किनकि आस्था र विश्वासले नै व्यक्तिलाई काम गर्ने जाँगर र उत्साह प्रदान गरेका हुन्छन् । केही गरेपछि केही हुन्छ भन्ने किसिमको आस्था यदि व्यक्तिभित्र छैन भने उसले काम पनि गर्दैन, मिहिनेत पनि गर्दैन । त्यसैले, गौतम बुद्धले सद्गुणी जीवनका निमित्त आस्था आवश्यक हुन्छ भनेर भन्न खोज्नुभएको हो ।
आस्थाप्रति जिससको पनि उत्तिकै आस्था छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘आस्था जीवनका लागि आवश्यक छ, तर यसका साथसाथै कर्म पनि गरिनुपर्दछ । मृत्युका अवस्थासम्म पनि आस्थावान् हुने व्यक्तिले नै जीवनको उच्चता प्राप्त गर्दछ । साथै, पूर्ण ज्ञान र मनोकाङ्क्षापूर्तिका लागि पनि आस्था आवश्यक छ’—महात्मा जिससका यी विचारहरु पनि अत्यन्त मननीय छन् । आस्थाका साथ गरिएका मागहरु पनि पूरा भएर जान्छन् भन्नु उहाँको विचार रहेको छ ।
आस्था जीवनको आवश्यकता
आस्था त जीवनभरिकै आवश्यकता हो । यसैले, जीवनभर हामीमा आस्था र विश्वासको सङ्कट आउन दिनुहुँदैन, विश्वासको खडेरी कतैतिर नपरोस् भनेर सचेत बनिरहनुपर्दछ । जीवनप्रति यदि हामीमा आस्था भएन भने, हामीले गर्ने कर्तव्यप्रति पनि हामीलाई विश्वास र निष्ठा भएन भने नीरस हुन्छ, हाम्रो जीवन । यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
कन्फ्युसियसले भनेका छन्, ‘आस्थारहित व्यक्ति कहिल्यै सफल बन्दैन ।’ त्यसैले, मानिस आफ्नो आस्थाबाट कहिल्यै पनि विचलित हुनुहुँदैन । आस्थालाई विचलित तुल्याउने क्रममा विभिन्न जटिलताहरु आउँछन् । तर, ती अप्ठ्याराहरुप्रति पनि हामी क्रूर हुनुको सट्टा आस्थावान् बन्न सक्नुपर्दछ । हामीले सोच्नुपर्दछ– ‘यी अप्ठ्याराहरुले पक्कै हाम्रो जीवनमा केही नयाँ लिएर आएका छन् । यिनको सन्देश अन्यन्त गहिरो हुनुपर्दछ । अवश्य यिनले मलाई केही नयाँ सिकाएर जानेछन् ।’ यसरी जटिलताहरुप्रति पनि हामी आस्थावान् हुन सक्नुपर्दछ भन्ने कन्फ्युसियसको भावना देखिन्छ किनकि जटिलताहरुका बीचमा पनि श्रम गर्न नछोड्ने व्यक्ति नै सधैँ सफल बन्दछ भन्ने सत्य हामी सबैलाई थाहा छ ।
जीवनमा अप्ठ्याराहरु हामीलाई बलियो बनाउन आउँछन् । यी अप्ठ्याराहरुको कामै हामीलाई खार्नु हो, ताछ्नु हो । हामं्रा अहम् उत्तरदायित्वप्रति हामीलाई आस्थावान् बनाउनका निमित्त, हाम्रा मूल्य र जीवनदर्शनप्रति हामीलाई निष्ठावान् बनाउनका निमित्त र श्रमप्रति लगनशील बनाउनका निमित्त पनि समयले हामीलाई जीवनका बीचबीचमा अप्ठ्याराहरु पस्किएर ठूलो गुन लगाएको हुन्छ ।
हामीसँग सधैँ हाम्रो अनुकूल अवस्था रहँदैन । हामी थुप्रै प्रतिकूल अवस्थाहरुबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ । नमीठा अनुभूतिहरुले पिरोल्ने स्थितिलाई पनि हामीले झेल्नुपर्ने हुन्छ । तर पनि, त्यतिखेर हामीले हाम्रो जीवन र भविष्यप्रतिको विश्वासलाई गुमाउनुहुँदैन भन्ने अनुभवीहरुको भनाइ छ ।
हामी हुर्किएको माटोप्रति, हामी हिँडेको बाटोप्रति, हामी भुल्दै गरेका मानिसहरुप्रति अनि स्वयम् हाम्रै जीवनप्रति यदि हामीमा अनास्था पलायो भने त्यो सबैका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ । हामी यी सबैप्रति श्रद्धानत र विनीत बन्नुपर्दछ ।
ज्ञान र विज्ञानको बाटो
‘प्रज्ञाको मार्ग आस्था हो । सच्चा हृदयले चाहेमा मानिसलाई आस्था प्राप्त हुन्छ । आस्थावान् मानिस सबैको प्रिय हुन्छ’– यो उपनिषद्को वचन हो । यदि हामीले अरुलाई विश्वास गर्दछौँ भने अरुले पनि त हामीलाई विश्वास गर्दछन् नि । विश्वास मात्रै गर्दैनन्, प्रेम पनि गर्दछन् किनकि आस्था नै प्रेमको आधार हो । प्रज्ञाको बाटो पनि आस्था हो । ज्ञान र विज्ञानको बाटो पनि आस्था हो । पुस्तकहरुप्रति हामीमा आस्था छैन, किताब पढेर केही हुन्छ भन्ने आस्था छैन भने र पुस्तकभित्र ज्ञान छ भन्ने विश्वास नै छैन भने ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ र ?
हृदयलाई पवित्र राख्न सकियो भने वा अत्यन्त निर्मल मनले आस्था खोज्यौँ भने अवश्य त्यो आस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ । आस्था प्रज्ञाकोे पनि मार्ग हो र आस्थावान् मानिस सबैको प्रिय हुन्छ भनेर कन्फ्युसियसले यसरी आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्, आस्थाका सन्दर्भमा ।
वर्धमान महावीरले आफ्नो दर्शनमा भन्नुभएको छ, ‘आस्थावान् मानिसले सही मार्ग छानेको हुन्छ । उसले जहिले पनि आस्थाको अभ्यास गरिरहनुपर्दछ । ईश्वर, समाज, देश, विभिन्न विचार र आफ्नो हैसियत र सम्भावनाप्रतिको आस्थाले नै व्यक्तिलाई सत्पात्र बनाउने कुरा महान् मनीषीहरुले व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तो आस्थावान् व्यक्तिले कहिल्यै गलत बाटो छनोट गर्दैन, नराम्रो कुराको चिन्तन पनि गर्दैन । ऊ कुमार्गमा हिँडेर बिग्रने सम्भावना पनि अत्यन्त न्यून हुन्छ । सद्मार्गमा त आस्थावान्हरु नै सर्वदा गतिशील भइरहन्छन् । ‘थोरै मात्र पनि कसैप्रति शङ्का गर्नु मानिसको प्रकृतिसँग नमिल्दो कुरा हो । आस्था मनुष्यका लागि आधारभूत विषय हो’– यो सिन्तो धर्मको मान्यता हो ।
शङ्काले लङ्का जलाउँछ
हामीले जीवन शङ्काको डोरीमा पिङ खेलेर कहिल्यै पनि बाँच्न सक्दैनौँ । हामी सबैलाई ‘शङ्काले लङ्का जलाउँछ’ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ । यसैले, सबैप्रति विश्वास गर्न सक्नुपर्दछ भनेर भनिएको हुनुपर्दछ तर अतिविश्वास र अविश्वास यी दुवै हाम्रालागि घातक छन् भन्ने तथ्यतिर भने विचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । विश्वास गर्नु वा कसैप्रति आशावादी बन्नु अतिविश्वास होइन । अतिविश्वास त प्रज्ञाहीन र अन्धविश्वासपूर्ण हुन्छ ।
प्रकृतिसङ्गत गतिशीलताको नाम पनि आस्था हो । प्रकृतिका हरेक सिर्जनाहरु एकअर्कामा अत्यन्त आस्थावान् छन् । धर्ती आकाशप्रति आस्थावान् छ । आकाश धर्तीको विश्वासमा अडिएको छ । माटोलाई ढुङ्गाको भरोसा छ भने ढुङ्गालाई माटोको भरोसा छ । जूनताराहरु चन्द्रमाको भर परेका छन् । हावालाई पानीको विश्वास छ, पानीलाई हावाको विश्वास छ । प्रकृतिका यी सबै सिर्जनाहरु कति सुन्दर तरिकाले मिलेर बसेका छन्, आहा !! सबैसबैप्रति आस्थावान् छन् । यसरी हेर्दा आस्था हाम्रो नैसर्गिकता पनि हो र प्राकृतिक आवश्यकता पनि हो भन्न सकिन्छ ।
गुरू नानकले भन्नुभएको छ, ‘असल जीवन र अमरता आस्थावान्हरुको पुरस्कार हो । नानकका अनुसार आस्थावान् नभईकन हामीले असल जीवन पनि बाँच्न सक्दैनौँ । संसारमा जो–जो अमर भए, आस्थावान्हरु नै भए । शेक्सपियरको कविताप्रतिको आस्था थियो । लियो नार्दोदा भिन्चीको आस्था चित्रकारिता थियो । नारायणगोपालको आस्था गीतसङ्गीतप्रति थियो । फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको रोगीहरुको सेवाप्रतिको आस्था थियो ।
महान् मान्छेहरु यसरी आफूभित्रको प्रतिभाप्रति कतै न कतै, कुनै न कुनै किसिमले आस्थावान् भएकै हुन्छन् । विवेकानन्द आफ्नो धर्म र संस्कृतिप्रति आस्थावान् थिए । संसारका लगभग सबै मानिसहरु आआफ्ना मूल्यहरुप्रति आस्थावान् थिए, आफ्नो अस्तित्वप्रति आस्थावान् थिए ।
यसप्रकार आफ्नो अस्तित्वप्रति आस्थावान् हुनेहरु र हृदयमा विश्वासको भावना प्रबल हुनेहरु नै अमर पनि बन्न सक्दछन् संसारमा र तिनै आस्थावान्हरुकोे जीवन नै वास्तवमा असल जीवन पनि बन्न सक्दछ । आस्थावान्हरुको मनलाई उच्च चेतना र अन्तज्र्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने पारसी धर्मको मर्म हो । अन्तज्र्ञान आस्थाविना सम्भव छैन कतै पनि । त्यसैले, अन्तज्र्ञानीहरु आस्थाको त्यही भ¥याङ चढेर नै त्यो विशिष्ट अवस्थामा आइपुग्दछौँ ।
आस्था र कर्म परिपूरक
हितोपदेशमा बताइएको छ, ‘कर्मविनाको आस्था मृतआस्था हो ।’ भगवान्प्रतिको आस्थासँगै हामीले कर्ममा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्दछ । यदि कर्म गर्दैनौँ भने कोरा आस्थाको कुनै अर्थ हुँदैन । कर्मविनाको आस्था त मृतआस्था हो भन्ने हितोपदेशको भनाइ अत्यन्त मननीय छ । हामीले कर्मलाई केन्द्रमा राखेर आस्थालाई विकास गर्न सक्नुपर्दछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा आस्था भन्नु नै कर्म रहेछ । आस्था र कर्म एकअर्काका परिपूरक हुन् । एकको अभावमा अर्काको कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन । कर्मविनाको भगवान्प्रतिको एकोहोरो आस्था र विश्वासले केही गर्नेवाला छैनन् ।
आस्थासँगसँगैको जीवन नै बल्ल पूर्ण र जीवन्त हुन्छ । कर्मविनाको विश्वास अन्धविश्वास बनिदिन्छ भनेर त¤वज्ञहरुले भनेका छन् । आस्था भावना र अन्तस्करणको कुरा हो । भावना भन्नु नै हाम्रो विचार पनि हो । आस्थाविनाका कामहरु संसारमा कतै सफल भएका छैनन् र हुँदैनन् पनि । आज हामीकहाँ यही आस्थाको चौतर्फी खडेरी परेको छ । हामी स्वयम्प्रति पनि विश्वस्त हुन नसकेको अवस्था अत्यन्त भयानक र विकराल अवस्था हो । यसैले, मनभित्रका अनास्था र नास्तिकताहरुलाई हटाएर आस्था र विश्वासका नयाँ बिरूवाहरुले फुलाउने प्रयास गरौँ किनकि आस्था भन्नु नै सर्वस्व हो । आस्था भए हामी छौँ, हामीभए आस्था छ । यसैले, आउनुस्, हामीले चराचर जगत्, यहाँका मानिस, हाम्रा मूल्य र दर्शनहरुसँगै जीवन भोगाइक्रममा उपलब्ध सबैसबै प्राप्तिहरुप्रति नतमस्तक र परम आस्थावान् बन्ने सङ्कल्प गरौँ । जीवनप्रतिको यही आस्थाको भ¥याङ चढेर नै हामी जीवन सार्थकताको पनि यात्रा गर्न सफल बन्दछौँ । अस्तु ।